သံလွင်: ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာက အဖြစ်မှန်လေး...........
ကျွန်တော်တို.ကျေးရွာက ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မအူပင်မြို.နယ် ထရော်ဝ ကျေးရွာဖြစ်ပါသည် ။ ထိုကျေးရွာသည် နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကို ခံခဲရသော ကျေးရွာတစ်ရွာလဲ ဖြစ်ခဲ.ပါသည်။ ထိုကြောင့်
မြန်မာ နိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း အဖွဲ့ချုပ်က ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဒဏ် အဆောက်အဦး ကြီးတစ်ခုအား လာရောက်ဆောက်လုပ်ပေးသွားခဲ့ပါသည်။
ထိုအဆောက်အဦးကြီးကို ၁၀.၆ .၂၀၁၂ နေ.တွင်မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း ဥက္ကဌ ဒေါက်တာဦးသာလှရွှေ နှင့် နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးမှ ကျွန်တော်တို. ကျေးရွာသို့ လာရောက်ပြီး ဖွင့်လှစ်ပေးသွားခဲ့ပါသည်။
ထို့သို့ ဖွင်.လှစ်ပေးခံ.ရာတွင် ထရော်ဝကျေးရွာအုပ်စု ထရော်ကျွဲလမ်း ကျေးရွာတွင်ရှိသော အခြေခံပညာ မူလတန်းလွန် ကျောင်းတွင်ရှိသော ကျောင်းသား ၆၀၀ ခန်.အား ကျောပိုးအိတ် တစ်ယောက် တစ်လုံးကျဖြင်. ဝေမျှရန် ကျောင်းအုပ် ဆရာမကြီး ဒေါ်တင်မြ၀င်းနှင့် သူ၏ ယောက်ကျားဖြစ်သူ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ဦးစိန်မြင်. ထံသို့ ပေးအပ်ခဲ.ပါသည်။
ထိုကျောပိုးအိတ်အတွင်းတွင် ကျောင်းသာအသုံးအဆောင်များဖြစ်သော အင်ကျီ၊ပုဆိုး၊ စာရေးကရိယာ၊ ထမင်ဘူး ရေဘူး ၊ ကွန်ပါဘူးစသည် ပစ္စည်းများပါရှိပါသည်။
ကျးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုးနှင့် ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးမှ ထိုပစ္စည်းတွေကို ကျောင်းသားတွေအား ၁၁.၆.၂၀၁၂ နေ.တွင် ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို ပိုက်ဆံတစ်ထောင် ပေးမှ ထိုပစ္စည်းတွေ အား ကျောင်းသားကိုပေးပါသည်။
ထို.ကြောင့် ကျောင်းသားများနှင့် ကျောင်းသားမိဘများသည် အခက်အခဲများဖြစ်နေပြီး ထိုပစ္စည်း
များကို လိုခြင်သောကြောင့် ချေးငှား ပေါင်နှံပြီး ပိုက်ဆံရှာကာ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှုးထံတွင် သားရောက်ပြီးပိုက်ဆံဖြင်လဲယူနေရပါသည်။
ထိုကြောင့် ကျွန်တော်တို.ကျေးရွာတွင် ရှိသော လူတစ်စုကြောင်. MRCS . ICRC စတဲ.အဖွဲ. အစည်းတွေ၏ စေတနာတွေဟာ အလကားဖြစ်ရသလို အလွန်ဆင်းရဲသော ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ ဒုက္ခရောက်နေရပါသည်။ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို.ကျေးရွာ၏ အဖြစ်မှန်ကို တတ်နိုင် သလောက်ဝေမျှပေးစေခြင်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ထိုသတင်းသည် အဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းစုံ သိခြင်ပါသေးလျှင် ကျွန်တော် ငြိမ်းချမ်းနိုင်၏ ဖုန်းနိုင်ပါတ် ..၀၉၇၃၁၁၀၃၄၃ သို.ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
at 6/12/2012 03:18:00 PM